Peppa ဝက်အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းတွဲများ။ | The Traffic Jam | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
ပိုများသော Peppa ဝက်ဇာတ်လမ်းတွဲများ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFEgnf4tmQe_L3xlmtFwX8Qm5czqwCcVi
#Peppa #PeppaPig #Preschool #Toddlers ☆ပိုပြီးဗီဒီယိုများအတွက် Subscribe to: http://bit.ly/PeppaPigYT
❤️ ဒီမှာနောက်ဆုံးတင်တင်များကိုကြည့်ပါ။ https: //www.youtube.com/playlist? list ...
here ဤနေရာတွင် Peppa ဝက်၏လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ။ https: //www.youtube.com/playlist? စာရင်း ...
Peppa ဝက်အင်္ဂလိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲ | Peppa ဝက်ဇာတ်လမ်းတွဲအပြည့်
တရားဝင် Peppa ဝက်ရုပ်သံလိုင်းနှင့် YouTube ရှိ Peppa ၏အိမ်သို့ကြိုဆိုပါ။ Peppa ၏ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံး Peppa ပရိသတ်များကိုပင်ပျော်ရွှင်စေနိုင်မည့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်စုစည်းမှုများပြုလုပ်ထားသည်။ Peppa Pig Official ရုပ်သံလိုင်းတွင်ကလေးများသည်ပျော်ရွှင်။ ပျော်ရွှင်နိုင်၏။ Peppa ဝက်သည်သူ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကစားခြင်း Peppa ဝက်နှင့်အတူကစားခြင်း Peppa ဝက်ကလစ်များနှင့်ဖြစ်စဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ Mummy Pig နှင့် Daddy Pig သည်အိပ်ရာဝင်ချိန်အဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြသည်။ Peppa ဝက်ဇာတ်လမ်းတွဲကာတွန်း၊ ကလေးများအတွက် Peppa ဝက်သီချင်းများ၊ Peppa ဝက်ကစားစရာကစားခြင်းနှင့် Peppa Pig Stop လှုပ်ရှားမှုသည်ကလေးငယ်များ၏နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံများကိုအဓိကထားသောကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးသည်။ ပျော်မွေ့ပါ။
Peppa ဟာချစ်စရာကောင်းပြီးလေးစားစရာကောင်းတဲ့ piggy လေးဖြစ်ပြီးသူ့အစ်ကိုဂျော့ခ်ျ၊ Mummy Pig နဲ့ Daddy ဝက်တို့နှင့်အတူနေထိုင်သည်။ Peppa ၏အကြိုက်ဆုံးအရာများမှာဂိမ်းများနှင့်တေးဂီတများကစားခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်အသံများသင်ယူခြင်း၊ သူမ၏စွန့်စားခန်းများသည်ရယ်မောသံများနှင့်အမြဲပျော်ရွှင်စွာအဆုံးသတ်သည်။
🎵 Peppa ဝက်သီချင်းများနှင့်ပျိုးခင်း Rhymes
https:? //www.youtube.com/playlist စာရင်းကို ...
❤️ Peppa ဝက်ကစားစရာကစားနှင့် Peppa ဝက်ရပ်တန့်အဆိုကို
https : //www.youtube.com/playlist? list ...
🌟လူကြိုက်အများဆုံး Peppa ဝက်ဗီဒီယိုများ
https: //www.youtube.com/playlist? စာရင်း ...
umm Mummy Pig Specials
https://www.youtube ။ com / playlist? စာရင်း ...
addy Daddy Pig Specials
ep Peppa ဝက်ဟယ်လိုဝိန်းအထူး
ep Peppa ဝက်ခရစ္စမတ်အထူး
https://www.youtube ။ com / playlist? list ...
ep Peppa ဝက်နှင့်အတူလေ့လာပါ
။ http: //www.youtube.com/playlist? စာရင်း ...
ep Peppa ဝက်မွေးနေ့အထူး
💪 Peppa ဝက်အားကစားအထူး
ep Peppa ဝက်ရာသီ 8
Peppa ဝက်နှင့်သူမ၏မိသားစုနှင့်တွေ့ဆုံပါ -
Peppa ဝက်သည်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောဝက်ဖြစ်သည်။ သူမလေးနှစ်သမီးဖြစ်ပြီး Mummy Pig, Daddy Pig နှင့်သူမ၏ညီငယ် George ဖြစ်သည်။ Peppa သည်သူမ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Suzy Sheep နှင့်ကစားခြင်းဖြစ်ပြီး Granny နှင့် Grandpa Pig သို့ သွား၍ ဂျော့ခ်ျအားကြည့်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ Peppa သည်ရွှန်းရွှန်းရွှန်းရွှန်းရွှန်းရွှန်းရွှင်စွာဖြင့်ခုန်ချခြင်း၊ ရယ်မောခြင်းနှင့်ဆူညံသံကျယ်စေခြင်းများကိုနှစ်သက်သည်။
George သည် Peppa ၏ညီငယ်ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၈ လအရွယ်ဖြစ်ပြီးသူ၏ညီမ Peppa နှင့်သူမအလုပ်များနေချိန်တွင်ပင်ကစားလိုသည်။ ဂျော့ခ်ျ၏အကြိုက်ဆုံးအရာမှာသူ့ကစားစရာဒိုင်နိုဆောဖြစ်သည်။ သူကနေရာတိုင်းကသူနှင့်အတူသယ်ဆောင်။ ဂျော့ချ်သည်စကားမပြောနိုင်သေးသော်လည်းစကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုကောင်းစွာပြောနိုင်သည် - 'Dine-saw!'
Mummy Pig သည်ရွှံ့အိုင်များတွင်တက်ခုန်ဆင်းခြင်းနှင့် Peppa နီးပါးနီးပါးတူသည်ကိုနှစ်သက်သည်။ သူမသည်အိမ်မှသူမ၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်ကီးဘုတ်ကိုမထိမခိုက်ဘဲတခါတရံ Peppa နှင့် George ကိုကူညီနိုင်သည်။ သူမသည် Daddy ဝက်ထက်မြေပုံဖတ်ခြင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ပညာရှိသည်။
Daddy Pig သည်အလွန်ရယ်စရာကောင်းပြီးအမြဲတမ်းရယ်မောတတ်သည်။ အထူးသဖြင့်သူသည် Peppa နှင့် George တို့နှင့်ကစားသောအခါ။ Daddy ဝက်ကစက္ကူကိုဖတ်ပြီးကားထဲမှာသွားတဲ့ခရီးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ သူက cookies များကိုဖရုံသီးပိုင်နှင့် Peppa ကိုနှစ်သက်ပြီးသူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှောင်ပြောင်သည်။ Daddy Pig သည်မျက်မှန်တပ်ထားသည့်နေရာကိုသူမမှတ်မိသောအခါတစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်။
Peppa ဝက်ပြည့်စုံ | The Traffic Jam | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
ဤကဲ့သို့သောခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Peppa ဝက်ကိုပိုမိုရယူရန်သတိရပါ။
တရားဝင် Peppa ဝက်ရုပ်သံလိုင်းနှင့် YouTube ရှိ Peppa ၏အိမ်သို့ကြိုဆိုပါ။ Peppa ၏ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံး Peppa ပရိသတ်များကိုပင်ပျော်ရွှင်စေနိုင်မည့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်စုစည်းမှုများပြုလုပ်ထားသည်။ ပျော်မွေ့ပါ။
Mark Baker နှင့် Neville Astley မှဖန်တီးခဲ့သော Peppa ဝက်။
Peppa ဝက်နှင့်သူမသူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ရွှင်ပါစေ။ Suzy She, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Candy ကြောင်၊ , Delphine မြည်း၊ Peggi နှင့် Pandora Panda, Mandy Mouse, Simon Squirrel!
Peppa ဝက်အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းတွဲများ။ | ဘလက်ဘယ်ရီဘုရှ် | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
Harvest Stew + More CoComelon Kids Songs & Nursery Rhymes
Peppa Pig Official Channel | Peppa Pig's Christmas Gift
Steamed Buns Song | Make Food | Recipe Song for Kids + More Nursery Rhymes & Kids Songs - Super JoJo
Peppa Pig Full Episodes | Season 8 | Compilation 36 | Kids Video